Sisungule NgoLwesihlanu Isigaba Sesibili Semidlalo Yenguqu Yalonyaka kuPSL
Ntulikazi 10, 2015
Isigaba sesibili semidlalo yalonyaka eye Castle Premier Soccer League sisungulwe ngoLwesihlanu emini kulomdlalo obuphakathi kweqembu le Tsholotsho lele ZPC Kariba enkundleni ye White City ko Bulawayo.
Lumdlalo uphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni okuyimpumela engekho nhle kumaqembu womabili njengoba esesimeni esingekho sihle engalaneni yemiklomelo.
Womabili lawa maqembu akusigaba sangaphansi sengalane okuyilapho okulengozi enkulu eyokugunyulwa ekupheleni kwesizini.
Umqeqetshi weqembu le Tsholotsho uLizwe Sweswe uthi umklomelo abawuthole namhla ulakho ukubasiza phambili.
Iqembu le Tsholotsho lilemiklomelo elitshumi lanhlanu kuthi ele ZPC Kariba lona lilemiklomelo elitshumi lesithupha.
Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngoMgqibelo lapho iqembu le Chicken Inn elizemukela khona ele Caps United enkundleni ye Luveve, iqembu le Harare City lizadlala lele Flame Lily ngase Rufaro kuthi ele FC Platinum lizangqikilana leqembu le Chapungu ngase Mandava.
NgeSonto iqembu le Whawha lizadlala lele Dongo Sawmill enkundleni ye Ascot, iqembu le Dynamos lizemukela iqembu le Hwange enkundleni ye Rufaro, iqembu le Triangle lizadibana leqembu le Highlanders ngase Gibbo kuthi koBulawayo enkundleni ye Luveve iqembu le How Mine lizemukela iqembu le Buffaloes.
Wonke lawa maqembu aphindana umphehlo njengoba ngempelaviki edluleyo abedibene kumidlalo yokugqiba isigaba sakuqala sesizini yalonyaka.
Umdlalo wakuqala owohlobo lwe One Day International obuphakathi kweqembu elimela ilizwe le Zimbabwe kanye lalelo elimela ilizwe le India obusenkundleni ye Harare Sports Club uphele iqembu le India linqobe ngama runs amane.
Iqembu le India yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola ama runs ayi 255 ekupheleni kwama overs angamatshumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Ele Zimbabwe lithe seliphendula lenelisa ama runs angu 251 kuma overs angamatshumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa.
Lawa maqembu azadibana njalo kumdlalo ofanayo ngeSonto lango Lwesibili kuthi emva kwaleyo midlalo azadibana kwemibili eyohlobo lwe Twenty20.